လွတ်လပ်ရေးနေ့လေးမှာ ငါးလွှတ်ကုသိုလ်ယူရင်းနဲ့ လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုတွေကို ခံစားနေတဲ့ မင်းသမီးချောနေခြည်ဦး – Cele Myinkwin
Homepage / Local Celebrity / လွတ်လပ်ရေးနေ့လေးမှာ ငါးလွှတ်ကုသိုလ်ယူရင်းနဲ့ လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုတွေကို ခံစားနေတဲ့ မင်းသမီးချောနေခြည်ဦး
ထူးခြားတဲ့ အနုပညာအရည်အချင်းကြောင့် အနုပည ာလောကမှာ တစ်ရှိန်ထိုး နာမည်ရလာပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ အားပေးသူပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိလာသူလေးကတော့ Beauty Blogger မင်းသမီးချောလေး နေခြည်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေခြည်ဦးကတော့ အခုဆိုရင် အောင်မြင်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် ထိပ်ဆုံးကနေ ရည်တည်နေပြီး သွက်လက်ချက်ချာပြီး ထက် ထက်မြက်မြက်ရှိတဲ့ ပုံစံလေးကြောင့် အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးကလည်း ချစ်ခင်ခြင်းခံရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေခြည်ဦးကတော့ ဒီကနေ့ (၇၃) နှစ်မြောက် မြန်မာ့လွတ်လ ပ်ေ ရးေ န့မှာ ငါးလွှတ်ကုသိုလ်ယူရင်းနဲ့ လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုကိုခံစားနေကြောင်း ပြောလာပ ါတယ်။
“Happy 73rd Myanmar Independence Day 🇲🇲 နေခြည်တို့နိုင်ငံကြီး လွတ်လပ်သောအမိမြေ ဖြစ်တာ ၇၃ နှစ်တောင် ရှိခဲ့ပြီ။ နေခြည်တို့ကော လွတ်လပ်သော လူသားတွေ ဖြစ်ေ နကြရဲ့လား? လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီလား? နေခြည်ကတော့ I’mafree spirit and soul and I own my body. ဒါကြောင့် လွ တ် လပ်ခြင်းကို celebrate လုပ်တဲ့ ဒီနေ့ကို နေခြည်အရမ်းပျော် တယ်။ နေခြည်တို့ နိုင်ငံကြီးလည်း ၂၀၂၁ မှာ အစစ အရာရာ အဆင်ပြေချောမွေ့ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း.. ချစ်တဲ့နြေ ခည်” ဆိုပြီး နှစ်သစ်ဆုတောင်းစကားလေး ပြောလာပါတယ်။
နေခြည်ဦးကတော့ လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ ငါးလွှတ်ကုသိုလ်ယူခဲ့သလို အလုပ်တွေနားတဲ့ တစ်နေ့တာကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ ဖြတ်သန်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးကလည်း ဒီကနေ့ လွတ် လပ်ရေးနေ့မှာ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်နဲ့ ပေါ့ပါးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုေ တာ င်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ထူးျခားတဲ့ အနုပညာအရည္အခ်င္းေၾကာင့္ အနုပည ာေလာကမွာ တစ္ရိွန္ထိုး နာမည္ရလာျပီး တစ္နုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ့ အားေပးသူပရိသတ္အခိုင္အမာရရိွလာသူေလးကေတာ့ Beauty Blogger မင္းသမီးေခ်ာေလး ေနျခည္ဦးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနျခည္ဦးကေတာ့ အခုဆိုရင္ ေအာင္ျမင္တဲ့ အနုပညာရွင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ထိပ္ဆံုးကေန ရည္တည္ေနျပီး သြက္လက္ခ်က္ခ်ာျပီး ထက္ ထက္ျမက္ျမက္ရိွတဲ့ ပံုစံေလးေၾကာင့္ အနုပညာအသိုင္းအဝုိင္းတစ္ခုလံုးကလည္း ခ်စ္ခင္ျခင္းခံရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနျခည္ဦးကေတာ့ ဒီကေန့ (၇၃) နွစ္ေျမာက္ ျမန္မာ့လြတ္လ ပ္ေ ရးေ န့မွာ ငါးလႊတ္ကုသိုလ္ယူရင္းနဲ့ လြတ္လပ္ျခင္းရဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္နူးမႈကိုခံစားေနေၾကာင္း ေျပာလာပ ါတယ္။
“Happy 73rd Myanmar Independence Day 🇲🇲 ေနျခည္တို႔ႏိုင္ငံႀကီး လြတ္လပ္ေသာအမိေျမ ျဖစ္တာ ၇၃ ႏွစ္ေတာင္ ရွိခဲ့ၿပီ။ ေနျခည္တို႔ေကာ လြတ္လပ္ေသာ လူသားေတြ ျဖစ္ေ နၾကရဲ႕လား? လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကို အျပည့္အဝပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၿပီလား? ေနျခည္ကေတာ့ I’mafree spirit and soul and I own my body. ဒါေၾကာင့္ လြ တ္ လပ္ျခင္းကို celebrate လုပ္တဲ့ ဒီေန႔ကို ေနျခည္အရမ္းေပ်ာ္ တယ္။ ေနျခည္တို႔ ႏိုင္ငံႀကီးလည္း ၂၀၂၁ မွာ အစစ အရာရာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းရင္း.. ခ်စ္တဲ့​ေနျ ခည္” ဆိုျပီး နွစ္သစ္ဆုေတာင္းစကားေလး ေျပာလာပါတယ္။
ေနျခည္ဦးကေတာ့ လြတ္လပ္ေရးေန့မွာ ငါးလႊတ္ကုသိုလ္ယူခဲ့သလို အလုပ္ေတြနားတဲ့ တစ္ေန့တာကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ့ ျဖတ္သန္းေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ၾကီးကလည္း ဒီကေန့ လြတ္ လပ္ေရးေန့မွာ စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္နဲ့ ေပါ့ပါးေပ်ာ္ရႊင္နုိင္ၾကပါေစေနာ္။ ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေ တာ င္းေပးလိုက္ပါတယ္။
Previous post ဖေဖေနိုင်လူတောင်အရှုံးပေးသွားရလောက်အောင် မျက်ခုံး၊မျက်လုံးတွေ ကစားပြီး နာမည်ကြီး TIK TOK ကို ဆော့ပြလိုက်တဲ့သမီးချောလေးရဲ့ဗီဒီယို
Next post မိန်းကလေးပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အသည်းကို ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံထဲနဲ့ ခွဲလိုက်တဲ့လက်ရွေးစင် ဘောလုံးသမား ကျော်မင်းဦး